Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Wayaanaha oo Maalinta Gimbot 20 Kala Kulmay Waji Gabax Wayn.
Taliska Wayaanaha oo Maalinta Gimbot 20 Kala Kulmay Waji Gabax Wayn.
Posted by Dulmane	/ May 29, 2017
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ay maalin nimadii shalay taliska wayaanaha u ahayd maalin aad u adag oo aan soomarin mudadii dheerayd ee talada wadanka ay xooga kuhaysteen.
Sida xogta aan kuhelay taliska wayaanaha ayaa soo abaabulay xaflad ay ugu tala galeen in ay kuxusaan maalintii ay talada wadanka qabsadeen oo ay ugu magac dareen 20 Gimbot ama 20ka bisha 9aad ee tirsiga Itoobiya, taas oo kubeegnayd maalin nimadii shalay oo Axad ahayd.
Sida aan wada ogsoonahay maalintan oo ah maalin ay kooxda TPLF tu qadariso waxaa guud ahaan wadanka Itoobiya looyaqaano looga xusi jiray si heersare ah, waxaana dhaq dhaqaaqa xafladan ladareemi jiray bil kahor inta aan lagaadhan 20 Gimbot waxa ay uyaqaanaan.
Hase yeeshee sanadkan ayaa aad uga duwanaa sanadihii hore waxaana shanqadha maalinkan laga dareemay magaalada Addis Ababa oo sida xogta aan kuhelay dadka si qasab ah lagu keenay intooda badan, sidoo kale waxaa sanadkan aad ubadnaa Gobolo iyo Dagmooyin aan lagaba ogayn in ay maalintaasu jirto.
Wariyaha ONA uga soowarama magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya in shacabka kudhaqan magaalada Addis Ababa ay fariin cad udireen taliska wayaanaha oo isku doonayay in ay khudbad kajeediyaan xarunta dadka sida xooga ah loogu soo xareeyay.
Wariyaha ayaa sheegaya in ay xaflada yimaadeen Raysalwasaaraha Magac uyaalka ah ee Hailemarim Desaleng iyo ninka kumagacaaban madaxwaynaha wadanka ee dadku aysan aqooninba Dr Tashome Mulatu.
Kadib markay shacabku dhagaysteen khud badihii loosoo qoray nimankan ee beenta iyo dacaayadu ay kabuuxday waxay goobtu isu badashay goob qaylo iyo orin ah, waxayna dadku muujijeen sida ayna ula dhacsanayn khudbadaha kudhisan hafaryada iyo beenta waxayna dadku si cad usheegeen in dadka shacabka ah ay tabaalaysan yihiin.
Sidoo kale waxaa dariiqyada magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kalaba lagu arkayay dad shacab ah oo xidhan dharka asayda looyaqaano taas oo ay kumuujinayeen xasuuqa wadanka kajira iyo cadaalad darada gaamurtay ee haysata shacabka.
Dhinaca kale dadka shacabka ah ee kudhaqan qaar kamid ah Gobolada iyo dagmooyinka ayaa si cad fariin udiray waxayna shacabku muujiyeen in maalintan ay tahay maalintii laqabsaday taas oo aan mudnayn in loo dabaal dago.
Dhinaca kale shacabka geesiga ah ee Soomaalida Ogadenia ayaa sanadkan muujiyay geesinimo iyo dhiiranaan aan horay loo arag waxayna shacabku muujiyeen in maalinta 20ka Gimbot ay iyaga utahay maalin madow oo la aasay xaqoodii.